Srasta Khabar:: पाँचौं ‘स्रष्टा पदयात्रा’ अन्तर्गत सिर्जना वाचन Srasta Khabar
पाँचौं ‘स्रष्टा पदयात्रा’ अन्तर्गत सिर्जना वाचन
काठमाडौं र मकवानपुरको सिमानास्थित छापाडाँडा सिमपानी भन्ज्याङमा स्रष्टाहरूले आफ्नो सिर्जना वाचन गरेका छन् । पाँचांै ‘स्रष्टा पदयात्रा’ अन्तर्गत स्रष्टाहरूले आफ्ना साहित्य सिर्जना शुक्रबार दिउँसो त्यहाँ वाचन गरेका हुन् ।
शुक्रबार बिहान ८: ३० बजे काठमाडौंको टौदहबाट ११ जना स्रष्टाले चाल्नाखेल र बुसोन गाउँ हुँदै चम्पादेवीको दर्शन गरी चन्द्रगिरी डाँडानजिकै छापाडाँडा सिमपानी भन्ज्याङमा पुगेर साहित्य सिर्जना वाचन गरे । साहित्यकारहरू शशी थापा पण्डित, जय छाङ्छा राई, जसध्वज गुरुङ, डा. भक्त राई, डा. धनप्रसाद सुवेदी, डिल्लीराज अर्याल, श्यामबहादुर भावुक, नारायण तिवारी, लीलाराज दाहाल र पुरन राईले आ–आफ्नो रचना वाचन गरेका थिए ।
कार्यक्रममा उनीहरूले कविता, मुक्तक, गजल र असारे झ्याउरे भाकाको गीतसमेत प्रस्तुत गरे । करिब ६ घण्टाको लामो उकालो यात्रा पार गर्दा पनि थकान महसुस नगरी निकै जोसिएर साहित्यकाहरूले चियाको चुस्कीसँगै आ–आफ्ना रचना सुनाए । साहित्य वाचन श्रवणका लागि स्थानीय बासिन्दको उल्लेख्य उपस्थिति थियो । कार्यक्रमको समीक्षा गर्दै प्रेम स्याङ्तानले ‘स्रष्टा पदयात्रा’ संस्थामा आर्थिक फन्टको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने सल्लाह दिए । स्रष्टा पुरन राईले पदयात्रा गर्दा खानपान र स्वास्थ्यमा निकै ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए । एकै दिन आठ÷नौ घण्टाको यात्रा गर्दा निकै गाह्रो हुने हुँदा सकेसम्म पोसिलो र तगतिलो खानामा ध्यान दिनुपर्ने र पानी प्रशस्त पिउनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
अर्को महिनाको पदयात्रा गोदावरीदेखि फुल्चोकी हुँदै लाकुरी भन्ज्याङ आउने कार्यक्रम रहेको ‘स्रष्टा पदयात्रा’ का अभियन्ता जय छाङ्छा राईले जानकारी दिए । पदयात्राले लेखनमा सहयोग हुने तथा शारीरिक तन्दुरुस्ती बनाउने र विभिन्न ठाउँको मनोरम दृश्यावलोकन हुने भएकाले अति नै आनन्ददायी यात्रा भएको यात्रामा सहभागी स्रष्टाहरूको भनाइ थियो ।